Hitondra Filaminana Ao Yemen Ve Ny Fihaonambem-pirenena? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2014 1:19 GMT
Tonga amin'ny fampitsaharana ihany ny fihaonambem-pirenena (NDC) tao Yemen, rehefa niitatra efa-bolana ankoatra ny enim-bolana araka ny napetraka mialoha. Raha maro ireo miarahaba an'i Yemen tamin'ity dingana ity, miandry kosa ny Yemenita raha hisy tokoa ny tena fanovana politika sy ny fiafaran'ny herisetra eny ifotony.
Ny fihaonambem-pirenena izay nifarana tamin'ny 21 Janoary, dia efa nanomboka tamin'ny 18 marsa 2013 ary natao hifampiresahan'ny rehetra ireo fanamby marobe izay atrehin'i Yemen. Nahavita fifanakaloza-kevitra, fifampidinihana ary fifampiraharahana naharitra 10 volana, izay nanaovana ireo toromarika momba ireo fanamby, fifandonana ara-politika ary ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena samihafa ireo mpikambana 565, izay misolo tena ireo vondrona politika isan-karazany.
Fampiharana ny voalazan'ny Fifanarahan'ny Vaomieran'ny Fiarahamiasan'ny Firenena ao amin'ny Helodrano ny fifampiresahana, izay nanome tsy fanasaziana [fr] ny filoha teo aloha Ali Abdullah Saleh ho solon'ny famindram-pahefana nataony mankany amin'ny filoha-lefiny Abdu Rabu Mansour Hadi.
Nankasitraka an'i Yemen ireo mpanaramaso iraisam-pirenena.
Masoivoho Tiorka ao Yemen, Fazli Corman, izay tonga nanatrika ny lanonam-pamaranana nisioka hoe:
Mahafinaritra ny fiarahana tao amin'ny efitra nanaovana ny lanonam-pamaranana tamin'ny fihaonambem-pirenena
Nervana Mahmoud, Bilaogera sady mpaneho hevitra Ejipsiana nisioka hoe:
Arahabaina! nahavita tsara kokoa noho ny hafa i Yemen RT @AlArabiya_Eng: mamarana ny fihaonambem-pirenena nanahirana i Yemen
Nisioka ihany koa i Kenneth Roth, Tale mpanatanteraka ao amin'ny Fanarahamason'ny Zon'Olombelona hoe:
Ao anatin'ny faritra feno fahadisoam-panantenana, mitoetra ho tantara somary mahavelombolo ihany i Yemen satria nifarana ny Fihaonambem-pirenena. Ny lalàmpanorenana indray no dingana manaraka
Niarahaba an'i Yemen tamin'ny siokany ny sekreteran'ny Raharaham-bahiny Britanika, William Hague:
Arahabaina i Yémen tamin'ny lanonam-pamaranana ny Fihaonambem-pirenena. Zava-dehibe ankehitriny ny fanatanterahana. Maro ny asa miandry
Mbola tsy nientanentam-po tahaka izao tamin'ny fiafaran'ny Fihaonambem-pirenena ny Yemenita.
Safa Mubgar, mpiara-manorina ny Vodrona Tsy Miankina ao Yemen miorina ao Londra, nisioka hoe :
#Yémen (Fihaonambem-pirenena sns) – fahasahian'ny fanantenana !
Nanamarika ilay Bilaogera Alaa Isam, izay miahiahy ny amin'ny fitohizan'ny herisetra:
Malahelo manoloana ireo vola nolaniana tamin'ny fihaonambem-pirenena tao Yemen, nampiely ny fofon'ny vanjan-tafondro manerana ny firenena ny fiafaran'ny #NDCY #YemenAtsimo
Adam Baron, mpanao gazety monina ao Yemen, nanampy hoe:
“Nifarana tamin'ny herisetra ny fihaonambem-pirenena tao Yémen, tsy misy fanomanana fifidianana” : ny lahatsoratro androany dia milaza ny ny toe-javatra momba ny @McClatchyDC.
Nahitsy fiteny i Baron tao amin'ny lahatsoratra navoakany:
…Natao hifampiresahana iraisan'ny rehetra ny valandresaka mba hamahàna ny ratram-pon'ireo vondrona manomboka amin'ny mpikomy Houthi, izay lasibatra tamin'ny andiam-panafihana mahery vaika nataon'ny governemanta, ka hatramin'ireo mpisintaka tatsimo, sy ny tanora tsy faly, raha nodinihana ny fanitsiana ny lalampanorenana sy ny fitantanam-panjakana… Nefa, lasa ohatra amin'ireo fifandonana marobe ao Yemen izany. Nolazaina mialoha fa haharitra enim-bolana ny fihaonambe, saingy noho ireo tsy fitovian-kevitra sesilany no nahatonga ny fanalavana azy. Na dia izany aza anefa, mbola mitohy ny herisetra any amin'ny faritra maro amin'ny firenena, izay mampisongadina ny fisian'ny fizarazarana ara-politika hatrany.
Manahy ihany koa i Danya Greenfield, talen'ny Foibe Rafik Hariri Hoan'ny Afovoany-Atsinanana fa tsy tsara fiafarana avokoa ny zava-drehetra. Hoy izy nanoratra tao amin'ny Atlantic Council :
Indrisy, tsy hamaha ireo ady ireo ny fahavitan'ny Fifampidinihana, ary tsy hanatsara ny toekarena na hampihena ny tsy fanjarian-tsakafo. Ireo zava-iainana isan'andro tena manahirana ny ankamaroan'ireo Yemenita, izay miahiahy ny amin'ny tsy fisian'ny filaminana sy ny filàna fototry ny fianakavian'izy ireo. Mbola miandry indray ny tombotsoa avy amin'ny tetezamita politika na ny fanatsarana ny fari-piainan'izy ireo… Mankany amin'ny mpitondra ambony ao Yemen ankehitriny ny fanerena hampandroso ny tombotsoam-pirenena amin'ny fampihenana ny tombotsoa manokana ary mamaly ny hetahetan'ireo izay nanokana an-kerimpo ny fiainany hizotra mankany amin'ny fanovana tao anatin'izay telo taona izay.
Taorian'ny savorovoro 10 volana tao Yemen, faly ny Yemenita amin'ny ankapobeany satria tontosa ihany ny fihaonambem-pirenena. Ny fanontaniana dia amin'ny fomba ahoana ary rahoviana no hampiharana ireo vahaolana, satria marobe ireo Yemenita miandry izany am-panantenana, fa tsy hoe ny hitantana ny tetezamita politika ihany fa indrindra indrindra ny hanatsara ny fari-piainany.
51 minitra izayTiorkia